NewGene waxay heshay liisanka is-tijaabinta iswada-baarista ee 'COVID-19 antigen' ee dalalka 6 markale! Markii hore wuxuu ku guuleystay European Professional Whitelist Grand Slam!
Horaantii Abriil, tiro warbaahin ah ayaa soo warisay in soo saaraha Hangzhou ee soo saaraha COVID-19 reagent-NEWGENE (Hangzhou) Shirkadda Bioengineering ee shirkadda NEWGENE ee COVID-19 antigen ay ku guuleysatay xirfadle caddeeya dhammaan waddammada waaweyn ee Yurub. Dhawaan, shirkaddu waxay ogaatay in ...
War wanaagsan! NEWGENE Waxay ku heshay Ansixin Is-baaris ah Faransiiska
14-ka Maajo, NEWGENE COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen waxaa loo oggolaaday is-tijaabinta isticmaalka Faransiiska ee ANSM. Tani waxay ku xigtaa oggolaanshaha is-imtixaanka ka dib Jarmalka, Belgium, Danmark, Sweden, Czech Republic. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ah waddamada ugu muhiimsan Midowga Yurub. Ilaa hadda, kaliya shirkado aad u tiro yar ayaa t ...
NEWGENE Waxay Heshaa BfArM Ansixin Is-baaris ah oo Jarmalka ah
NEWGENE COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen wuxuu helay oggolaanshaha deg-degga ah Wakaaladda Federaalka Jarmalka ee Daawooyinka iyo Qalabka Caafimaadka (BfArM) ee loogu talagalay isticmaalka guriga, waxayna ku qoran tahay is-baaris (GZ 5640-S-296/21). Ansaxnimadu waa illaa 11th Ogosto 2021, taas oo hadda haysata waqtiga ugu dheer ee ansax ah dhammaan ...
NEWGENE Novel Coronavirus Antigen ogaanshaha waxsoosaarka ayaa helay warbixin TV gaar ah oo kusaabsan idaacada maxaliga ah ee Isbaanishka Antena3 Wax soo saarka NEWGENE wuxuu helaa caan caan ah waxaana si weyn looga aqoonsan yahay gudaha waxqabadkeeda ka sarreysa iyo qalalaasaha ...
COVID-19 / Hargabka A / Aaladda Qalabka Ogaanshaha Hargabka B
Ujeeddada Isticmaalka Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada ee COVID-19 / Hargabka A / Hargabka B ee tijaabooyinka xaakada / Saxarada. Waxay ka caawisaa baaritaanka cudurka infekshannada fayrasyada kor ku xusan. Soo Koobid Buugga cusub ee loo yaqaan 'coronaviruses belon ...
Ujeeddada Isticmaalka Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada ee COVID-19. Waxay bixisaa caawimaad ku saabsan ogaanshaha infekshinka cudurka loo yaqaan 'coronavirus' cusub. Soo Koobid Buugga cusub ee loo yaqaan 'coronaviruses' waxaa iska leh genus. COVID-19 waa neefsasho daran i ...
Isbarbardhiga tiknoolajiyada ogaanshaha COVID-19
Tan iyo markii uu faafay Cudurka faafa ee COVID-19, dad badan ma aysan fahmin habab kala duwan oo lagu ogaado, oo ay ku jiraan ogaanshaha aaladda nucleic, ogaanshaha antibody, iyo ogaanshaha antigen. Maqaalkani wuxuu badanaa isbarbar dhigayaa hababka ogaanshaha. Ogaanshaha Nucleic acid hadda waa ...